ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ ဇနီးမောင်နှံတို့ အတွက် အကြံဥာဏ် ၅ ချက်!!!! - JAPO Japanese News
ဟူး 05 Feb 2020, 17:54 ညနေ
မိမိချစ်ရတဲ့သူနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ပြီဆိုရင် ၂ ဦးသားဟာ သေတဲ့အထိ ဘ၀တစ်ခုကိုအတူတူ ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ရတော့မှာပါ။ ခရီးလမ်းကလည်းရှည်တဲ့အတွက် ကြာလာတဲ့အခါ အချစ်ဆိုတာမလေးနက်တော့ဘဲ တစ်ခါတစ်လေရန်ဖြစ်စကားများရတာတွေလည်း ရှိလာပါတယ်။
အိမ်ထောင်ပြုမယ့် လူတိုင်းဒီအရာနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာမို့လို့ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ အကြံပေးထားတဲ့ စကားလေးတွေကိုရော နားထောင်ကြည့်အုံးမလား?
ဇနီးမောင်နံတွေအတွက်သာမဟုတ်ဘဲ၊ အိမ်ထောင်ပြုမယ့် ချစ်သူရည်းစားတွေလည်း သိထားသင့်တယ်နော်!
“၃ နှစ်မြောက်မှာ စလိမ်တတ်ပြီး၊ ၅ နှစ်မြောက်မှာ ကွဲတယ်”
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀မှာ ချစ်တယ်ဆိုတာက အများဆုံး ၃ နှစ်လောက်ကြာရင် အချစ်တွေလျော့ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လျို့ဝှက်ချက်တွေရှိလာတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်များလားတော့မသိဘူး ၅ နှစ်လောက်လည်းကြာရော အိမ်ထောင်ကွဲပါလေရော!!!!
ချစ်သူနှစ်ဦးသားက ချစ်လို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးတဲ့နောက်မှာ ကလေးယူမယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ အမျိုးသမီးဖြစ်သူက ကလေးကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုပြုစုပေးပြီး၊ အမျိုးသားတွေကတော့ လိုအပ်တာတွေအတွက် ဝင်ငွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးရတာပေါ့။
ကလေးကအရွယ်တစ်ခုအထိရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ အမျိုးသားတွေက လက်ရှိ သား၊မယားအပေါ်မှာ အရင်ကလောက်အထိ သံယောဇဥ်မရှိတတ်ကြတော့ပါဘူး။
ဒီအရာကို တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့သဘောတရားကနေကြည့်ရင် မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတွေမှာ အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ ပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့။
ဒါဆို သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကို ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲ?
နာမည်ကြီးဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ အကြံဥာဏ်ပေးထားတာကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။
၁။ မိမိခင်ပွန်းကို တခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့ မနှိုင်းယှဥ်မိပါစေနဲ့
ဒါကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး အဝတ်အစား Stylist တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Yoko Shibata ရဲ့ အကြံပေးစကားဖြစ်ပါတယ်။
“ လူတိုင်းမှာ သူ့ဟာနဲ့သူထူးခြားမှု ရှိပြီးသားပါ။
ကုမ္ပဏီလည်းမတူဘူး၊ ဒါကြောင့် ရတဲ့လစာလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူး။
ကလေးရဲ့ ဝေယျဝိစ္စကိုနိုင်နင်းတဲ့ ယောကျ်ားမျိုးရှိသလို၊ သဘောကောင်းတဲ့ ယောကျ်ားမျိုးလည်းရှိပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အားသာချက် အားနည်းချက်လည်း ကွဲပြားပါတယ်။
တခြားသူရဲ့ အမျိုးသားနဲ့ သွားယှဥ်ကြည့်မိလိုက်ရင်၊ မိမိအမျိုးသားရဲ့ အားနည်းချက်ကိုပဲ မြင်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုနှိုင်းယှဥ်တာက ကောင်းကျိုးမရှိတဲ့အတွက်၊ မလုပ်သင့်ပါဘူး”
၂။ မကြာခဏ ဟာသလေးတွေပြောပြီး ရယ်မောပါ။ စကားများတာတွေ နောက်တစ်နေ့အထိမကူးပါစေနဲ့။
ဒီစကားလေးကိုတော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ လူရွှင်တော် ဟာသသရုပ်ဆောင် Ooshima Miyuki က အဆိုပြုထားတာပါ။ စကားများရန်မဖြစ်ဖူးတဲ့အတွဲတွေကတော့ မသိနိုင်ပေမဲ့၊ အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာ အရေးအကြီးဆုံးကနားလည်ပေးမှုပါပဲ။ ပြီးရင်တော့ ဟာသလေးတွေပြောပြီး ရယ်မောပါ။ နေ့တစ်နေ့ရဲ့ အဆုံးကို ၂ ဦးသားပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့ ဖြတ်ကျော်ပါ။
၃။ မှားသွားပြီထင်ရင် ချက်ချင်းတောင်းပန်ပါ။
Kiyoshi Nishikawa ဆိုသူရဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တောင်းပန်ဖို့ခက်တာ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိမယ်နော်။ မတောင်းပန်ချင်တာကို နားလည်ပေမဲ့ ကိုယ်တကယ်ချစ်ပြီး အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးထင်ရင် ကိုယ်ကပဲအရင်တောင်းပန်လိုက်ပါ။
၄။ တစ်ဦးကို တစ်ဦး လေးစားပါ။
အဲ့ဒါကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး အဆိုတော် Ryudo Uzaki ရဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းပါ။
တစ်ဖက်လူကိုလေးစားပါ။ အဲ့ဒီတော့မှ ကိုယ်လည်းလေးလေးစားစားနဲ့ ပြန်ဆက်ဆံခံရမယ်။
၅။ နေ့တိုင်း ညစာအတူစားပါ။ ဒါမှမဟုတ် ဝိုင်အတူသောက်ပါ။
ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဇနီးမောင်နှံရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ခံစားချက်တွေမျှဝေပေးဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ တစ်နေ့လုံးမှာ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ၊ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကအစ အပြန်အလှန်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဝေမျှပေးပါ။ တိုင်ပင်ပါ။ အကြံဥာဏ်တွေရယူပါ။
ဇနီးမောင်နှံ ၂ ဦးကြားမှာ ပြောစရာစကားမရှိတော့တဲ့နေ့ဟာ အိမ်ထောင်ကွာရှင်းမှုရဲ့ အစပါပဲ။
ဒီစကားလေးကိုတော့ ဂျပန်လူမျိုး စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Akira Nakao ဆိုသူကပြောထားတာပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ikenami Shotaro ရဲ့ စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့စကားက ကျွန်တော်ကို သင်ခန်းစာတစ်ခုရစေတယ်။
သူကအိမ်ထောင်ကျသွားပေမဲ့ မိခင်နဲ့အတူနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိသားစုတိုင်းလိုလိုမှာ ဖြစ်တတ်တာက ယောက္ခမနဲ့ ချွေးမ မသင့်မြတ်တဲ့ပြဿနာပေါ့။ အဲ့ဒီကြားထဲမှာမှ သားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်၊ ခင်းပွန်းသည်လည်းဖြစ်တဲ့ Shotaro တစ်ယောက် ဒုက္ခများရပြီ။ နေထိုင်ကြီးပြင်းလာတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းချင်းမတူတော့ အဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြစ်တတ်ပေမဲ့၊ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျ။
အဲ့ဒီလိုကိစ္စကလည်း ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကြားမှာ ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေအထိတောင် ဖြစ်လာပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာ Shotaro ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ နည်းစနစ်က အရမ်းချီးကျူးဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြန် share ပေးပါ့မယ်။
“သူတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ ဘုံရန်သူလုပ်ပစ်လိုက်ပါ။”
မသင့်မြတ်သူ ၂ ယောက်စလုံးမှာ ဘုံရန်သူရှိလာပြီဆိုရင် သူတို့ ၂ ယောက်ဟာ အချင်းချင်းစကားပြောလာမယ် တိုင်ပင်လာမယ်။ ပြီးရင်တော့ သင့်မြတ်တဲ့ ယောက္ခမနဲ့ ချွေးမ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြောရရင်တော့ အတိုင်အဖောက်ညီသွားတာပေါ့ဗျ။
ကိုယ်က သူတို့ ၂ ယောက်အတွက် ရန်သူလိုသာလုပ်ကြည့်၊ သူတို့တွေ ချက်ချင်းတောင် သင့်မြတ်သွားမလားမသိဘူးနော်….(ရယ်လျက်)
“ဒါပါပဲ!! ကျွန်တော်ရဲ့ ဗျူဟာက။ သေချာတာကတော့ ဒီလိုလူဆိုးကြီးနေရာမှာနေလို့ အမြဲတမ်းမကောင်းပြောခံနေရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အကျိုးတော့ ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လား?”
ကဲ. စာဖတ်သူတို့ရဲ့ အိမ်အခြေအနေကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ?
အပေါ်မှာ ပြောပြပေးသွားတဲ့ အချက်တွေကို ပုံမှန်လုပ်ပြီးနေကြသူတွေရော ရှိမလား?
၂။ မကြာခဏ ဟာသလေးတွေပြောပြီး ရယ်မောပါ။
၃။ မှားသွားပြီထင်ရင် ချက်ချင်းတောင်းပန်လိုက်ပါ။
ဒီလိုအချက်တွေကို အိမ်ထောင်မပြုဖူးတဲ့ လူလွတ်တွေကတော့ မသိပေမဲ့၊ အိမ်ထောင်ပြုထားတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက်ကတော့ တန်းဖိုးရှိတဲ့ အကြံဥာဏ်လေးတွေပဲလို့တော့ ထင်မိပါတယ်။
ကဲ. စာဖတ်သူအပေါင်းတို့ ပျော်ရွှင်သင့်မြတ်ပြီး အချစ်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့ အိမ်ထောင်မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေနော်……
ဂျပန်ထောင်သားတွေရဲ့ ဘဝက ဘယ်လိုလဲ ? ?